Izindaba - Isingeniso ku-chlorine dioxide
I-Chlorine dioxide (ClO2) igesi ephuzi ngokuluhlaza nephunga elifana ne-chlorine elinamakhono amahle kakhulu okusabalalisa, okungena kanye nawokuvala inzalo ngenxa yesimo salo segesi. Yize i-chlorine dioxide ine-chlorine egameni layo, izakhiwo zayo zehluke kakhulu, kufana ne-carbon dioxide eyehlukile kune-elemental carbon. I-chlorine dioxide ibonwa njengesibulala-magciwane kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-1900 futhi yamukelwa yi-US Environmental Protection Agency (EPA) kanye ne-US Food and Drug Administration (FDA) ezinhlelweni eziningi. Kukhonjisiwe ukuthi kuyasebenza njenge-spectrum ebanzi, anti-inflammatory, bactericidal, fungicidal, kanye ne-virucidal agent, kanye ne-deodorizer, futhi futhi ikwazi ukwenza i-beta-lactams isebenze futhi ibhubhise yomibili iminyundu namaqanda ayo.
Yize i-chlorine dioxide ine "chlorine" egameni layo, i-chemistry yayo ihluke kakhulu kuleyo ye-chlorine. Lapho uphendula ngezinye izinto, ibuthakathaka futhi iyakhetha, ukuvumela ukuthi kube yisitshalo esisebenza kahle futhi esisebenza kahle. Isibonelo, ayisebenzi nge-ammonia noma izinhlanganisela eziningi eziphilayo. I-chlorine dioxide i-oxidize imikhiqizo kunokuthi iyichole, ngakho-ke ngokungafani ne-chlorine, i-chlorine dioxide ngeke ikhiqize izinhlanganisela ezingafuneki zemvelo eziqukethe i-chlorine. I-chlorine dioxide nayo iyigesi ebonakalayo ephuzi ngokuluhlaza evumela ukuthi ikalwe ngesikhathi sangempela ngamadivayisi we-photometric.
I-chlorine dioxide isetshenziswa kabanzi njenge-antimicrobial futhi njenge-agent ye-oxidizing emanzini okuphuza, amanzi enqubo yenkukhu, amachibi okubhukuda namalungiselelo wokugeza umlomo. Isetshenziselwa ukuhlanza izithelo nemifino kanye nemishini yokucubungula ukudla neziphuzo futhi isetshenziswe kabanzi kumalabhorethri ocwaningo lwesayensi. Iphinde yaqashwa embonini yezokunakekelwa kwempilo ukungcolisa amakamelo, ukudlula, izihlukanisi futhi njengesihlanzana somuthi wokuvala inzalo yomkhiqizo nengxenye. Ibuye isetshenziselwe kabanzi ukwenza iblichisi, ukukhipha isisu, nokukhipha ubuthi ezintweni ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-cellulose, iphepha-uginindela, ufulawa, isikhumba, amafutha namafutha, nezindwangu.